Emelitere Febụwarị 2017
Nnọọ na Ụlọ ahịa nke Microsoft ndị dị n’ịntanetị yana ebe mgbere. "Ụlọ ahịa" tụnyere ọdụ anyị n’ịntanetị yana n’ebe mgbere na enye gị ohere ịchọgharị, lelee, nweta, zụta, ma nye ogo ma nyochaa ngwaahịa yana ọrụ ndị gụnyere ngwaọrụ, akụrụngwa egwuregwu, ọdịnaya dijitalụ, ngwa, egwuregwu, ọrụ, na ihe ndị ọzọ. Usoro Ọrịre ndị a ("Usoro Ọrịre") na ekpuchi ojiji nke Ụlọ Ahịa Microsoft, Ụlọ Ahịa Office, Ụlọ Ahịa Xbox, Ụlọ Ahịa Windows, yana ọrụ Microsoft ndị ọzọ na arụtụ aka na Usoro Ọrịre ndị a (na mkpokọta "Ụlọ ahịa"). Site na Ụlọ ahịa, Microsoft na eweta ohere nke ọtụtụ akụrụngwa, gụnyere ebe mbudata, ngwanrọ, ngwaọrụ, yana ozi gbasara ngwanrọ, ọrụ yana akụrụngwa ndị ọzọ (na mkpokọta "Ọrụ" na nchịkọta nke Ụlọ ahịa, "Ụlọ ahịa"). Imirikiti ngwaahịa ahụ, ọrụ na ọdịnaya enyere na Ụlọ ahịa bụ ngwaahịa ndị ọzọ enyere site n’aka ndị ọzọ na abụghị Microsoft. Site na iji Ụlọ Ahịa ahụ, ma ọ bụ zụta ngwaahịa na ọrụ n'ime Ụlọ ahịa ahụ, ị nabatara ma kwenye na Usoro Ọrịre ndị a, Nkwupute Nzuzo nke Microsoft (hụ Nzuzo na Mkpuchido nke ngalaba Nkeonwe nke Microsoft dị n’okpuru), yana usoro na ọnọdụ ndị dị, iwu ma ọ bụ agụgọ ahụrụ na Ụlọ ahịa ma ọ bụ arụtụrụ aka n’ime Usoro Ọrịre ndị a (na mkpokọta "Iwu Ụlọ Ahịa"). Anyị na akwado gị ịgụ Iwu Ụlọ Ahịa ahụ nke ọma. Ị NWERE IKE Ị GAGHỊ EJI ỤLỌ AHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ AHỤ MA Ọ BỤRỤ NA Ị KWENYEGHỊ NA IWU ỤLỌ AHỊA AHỤ.
Ọ bụrụ na anyị nwere Ụlọ Ahịa Mgbere Microsoft dị n’obodo ma ọ bụ mpaghara gị, ọ nwere ike ịnwe iwu dị iche ma ọ bụ ndị ọzọ. Microsoft nwere ike imelite ma ọ bụ mezie iwu ọ bụla na enyeghị ọkwa n’oge ọ bụla.
Usoro Ndị Metụtara Otu I Si Eji Ụlọ Ahịa Ahụ
1. Akaụntụ Onye Otu. Ọ bụrụ na ụlọ ahịa ahụ chọrọ ka i mepee akaụntụ, ị ga-edejuputarịrị ụkpụrụ ndebanye ahụ site na ịnye anyị ozi ziri ezi n'uju nke akwụkwọ ndebanye ahụ enwere chọrọ. Enwekwara ike ịchọ ka ị nabata nkwekọrịta ọrụ ma ọ bụ usoro ojiji dị iche dị ka ọnọdụ nke imepe akaụntụ ahụ. Otu i si eji akaụntụ iji nweta Ụlọ ahịa ahụ yana ọdịnaya ndị ị nwetara site na Ụlọ ahịa ahụ dabere na usoro niile na achịkwa akaụntụ Microsoft ahụ. Maka ozi ndị ọzọ, biko hụ Nkwekọrịta Ọrụ Microsoft. Ị na ahụta maka idowe ozi akaụntụ gị na okwuntughe gị nke ọma, ma na ahụta maka mmemme niile na eme n’okpuru akaụntụ gị.
2. Achọghị Ojiji Megidere Iwu ma ọ bụ Nke Amachiri. Dị ka ọnọdụ nke otu i si eji Ụlọ ahịa na Ọrụ ndị ahụ, ị na ekwe anyị nkwa na ị gaghị eji Ụlọ ahịa ahụ maka ebumnuche ọ bụla na emegide iwu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ amachiri n’okpuru Usoro Ọrịre, Iwu Ụlọ Ahịa, ma ọ bụ usoro ndị ọzọ ọ bụla na emetụta otu i si eji Ụlọ Ahịa ahụ. Ị gaghị eji Ụlọ ahịa n’ụzọ nwere ike imebi, gbanyụọ, mekpaa, ma ọ bụ kwụchibido sava Microsoft ọ bụla, ma ọ bụ netwọk ejikọrọ na sava Microsoft ọ bụla, ma ọ bụ tinye aka n'ojiji na ọhụụ mmadụ ọzọ ọ bụla na eji Ụlọ ahịa ahụ. Ị gaghị anwa ịbanye n'ime Ụlọ ahịa ahụ, akaụntụ ndị ọzọ, sistemụ ma ọ bụ netwọk kọmputa ndị ejikọrọ na sava Microsoft ọ bụla ma ọ bụ na Ụlọ ahịa ahụ na ewetaghị ikike, site n'ụzọ adịgboroja, oyi okwuntughe ma ọ bụ ụzọ ọzọ ọ bụla. Ị gaghị anata ma ọ bụ nwaa ịnata ihe ma ọ bụ ozi ọ bụla site n'ụzọ ọ bụla akpachaghị anya nye n'ime Ụlọ ahịa ahụ. Ị gaghị eji Ụlọ ahịa ahụ n'ụzọ ga-agabiga ikike nke ndị ọzọ, gụnyere ịkpachara anya buteere mmadụ ma ọ bụ ihe mmekpa ahụ, gụnyere Microsoft. Ị gaghị eji maka azụmahịa kesaa, bipute, nye ikikere, ma ọ bụ ree ngwaahịa, ozi ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enwetara site na Ụlọ ahịa ahụ.
3. Ihe Ndị Ị Nyere Microsoft ma ọ bụ Bisa na Ụlọ Ahịa ahụ. Microsoft anaghị azọrọ ọnwịnwe nke ihe ndị ị nyefere na Microsoft (gụnyere nzaghachi, ogo, nnyocha na ntụnye) ma ọ bụ bisa, bugoo, tinye ma ọ bụ nyefee n'ime Ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụ ọrụ ndị Microsoft emetụtara maka nnyocha nke ndị ọzọ (n'otu "Nnyefe" na mkpokọta "Nnyefe"). Agbanyeghị, ị na enye Microsoft ikike anaghị akwụ ụgwọ, ebighebi, na enweghị nkagbu, zuru gburugburu ụwa, nke abụghị nke otu onye yana ikike enwere ike ịnyefe n'aka onye ọzọ maka iji, mezie, hakọọ, mepụtagharịa, mepụta ọrụ ndị nwere oyiri site na, tụgharịa asụsụ, dezie, mee, kesaa, ma gosipụta Nnyefe gị, gụnyere aha gị, n'ụzọ mgbasa ozi ọ bụla. Ọ bụrụ na i bipute Nnyefe gị n'akụkụ nke Ụlọ ahịa ebe o kpughepuru n'ịntanetị na enweghị mmachi, Nnyefe gị nwere ike igosi n'ihe ịmaatụ ma ọ bụ ihe ndị na akwado Ụlọ ahịa ahụ na/ma ọ bụ ngwaahịa, ọrụ na ọdịnaya ndị enyere n'ime Ụlọ ahịa ahụ. Ị na ekwe nkwa ma na egosipụta na ị nwere (ma ga-enwe) ikike niile achọrọ iji mee Nnyefe ọ bụla ị nwere yana iji nye ikike ndị a n'aka Microsoft.
Agaghị akwụ ego nkasi obi ọ bụla n'ihi ojiji nke Nnyefe gị. Microsoft anọghị n'okpuru mmanye ọ bụla iji bisa ma ọ bụ jiri Nnyefe ọ bụla, Microsoft nwere ike iwepu Nnyefe ọ bụla n'oge ọ bụla na mkpebi onwe ya. Microsoft anaghị eweghara ọrụ, ọ naghị anara ụta maka nnyefe gị ma ọ bụ ihe ndị mmadụ bisara, bugoo, tinye ma ọ bụ nyefee site na iji Ụlọ ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ịnye ogo ma ọ bụ nyochaa otu ngwa n'ime Ụlọ ahịa, ị nwere ike ịnweta ozi-e si n'aka Microsoft nke nwere ọdịnaya sitere n'aka onye biputere ngwa ahụ.
4. Njikọ ndị gara na Weebụsaịtị Ndị Ọzọ. Ụlọ ahịa ahụ nwere ike ịgụnye njikọ ndị gara na weebụsaịtị ndị ọzọ na eme ka ị hapụ Ụlọ ahịa ahụ. Saịtị ndị a ejikọrọ anọghị n'okpuru njikwa nke Microsoft ma Microsoft anaghị eweghara ọrụ maka ọdịnaya nke saịtị ọ bụla ejikọrọ ma ọ bụ njikọ ọ bụla enwere n'ime saịtị ejikọrọ. Microsoft na ewetara gị njikọ ndị a naanị ka ihe ịdị mma, ngụnye nke njikọ ọ bụla anaghị apụta nkwado nke Microsoft maka saịtị ahụ. Otu i si eji weebụsaịtị ndị ọzọ nwere ike ịdabere na usoro na ọnọdụ nke ndị ọzọ ahụ.
Usoro Ndị Metụtara Ọrịre nke Ngwaahịa NA ỌRỤ enyere Gị
5. Ọdịdị Mpaghara. Ngwaahịa na ọrụ ndị dị nwere ike ịdị iche iche site na mpaghara ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Na mgbakwunye, enwere ike ịnwe mmachi na ebe anyị nwere ike ibuga ngwaahịa dị ka atọrọ n'iwu mbugharị anyị. Iji mezuo nzụta gị, enwere ike ịchọ ka ị nwee adreesị ịgba ụgwọ na ebe njedebe ziri ezi n'ime obodo ma ọ bụ mpaghara nke Ụlọ ahịa ahụ ebe ị na eme nzụta.
6. Naanị Ndị Njedebe. Ị ga-abụrịrị onye njedede iji zụta ngwaahịa na ọrụ n'ime Ụlọ ahịa ahụ. Ndị nregharị etozughi ịzụta ihe.
7. Mmachi Mbupu. Ngwaahịa na ọrụ ndị azụtara n'ime Ụlọ ahịa nwere ike ịdabere na iwu na usoro njikwa kụstọms na mbupu. Ị kwenyere ịsọpụrụ iwu na usoro mba ofesi na mba ala niile dị.
8. Ịgba. Site na ịnye Microsoft ụzọ akwụmụgwọ, ị: (i) na egosi na ị nwere ikike iji ụzọ akwụmụgwọ ahụ ị wetara, na ozi akwụmụgwọ ọ bụla ị wetara ziri ezi; (ii) nye Microsoft ikike iji gbaa gị ụgwọ maka ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla dị azụtara site na iji ụzọ akwụmụgwọ gị; na (iii) nye Microsoft ikike iji gbaa gị ụgwọ maka atụmatụ ọ bụla nke Ụlọ ahịa ahụ akwụgoro ụgwọ ya nke ị họpụtara ịdebanye aha ma ọ bụ i ji. Ị kwenyere imelite akaụntụ gị yana ozi ndị ọzọ ozugbo, gụnyere adreesị ozi-e gị na nọmba kaadị akwụmụgwọ yana ụbọchị ngwụcha, ka anyị nwee ike imezu azụmahịa gị ma kpọtụrụ otu ekwesịrị na mmezu nke azụmahịa gị. Anyị nwere ike ịgba gị ụgwọ (a) n'ọdịniihu; (b) n'oge nzụta ahụ; (c) mpekere oge ka emechara nzụta; ma ọ bụ (d) na ntọala mmegharị maka ndebanye. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịgba gị ụgwọ ruo ọnụego ị kwadoro, anyị ga-ezitere gị ozi n'ọdịniihu yana n'ụzọ nke usoro nke ndebanye gị maka mgbanwe ọ bụla n'ọnụego a ga-agba maka ndebanye ndị na emegharị. Anyị nwere ike ịgba gị ụgwọ n'otu oge maka ihe karịrị otu oge ịgba ụgwọ gị gagoro aga maka ọnụego ndị ahazibeghị na mbụ. Hụ ngalaba Mmegharị Akpaaka dị n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị sonyere n'onyinye oge nnwale ọ bụla, ị ga-akagburiri ọrụ ahụ na ngwụcha nke oge nnwale ahụ iji zere ụgwọ ọhụrụ a ga-ebute belụsọ na anyị ezitere gị ozi ọzọ. Ọ bụrụ na ị kagbughi ọrụ ahụ na ngwụcha nke oge nnwale ahụ, ị na enye anyị ikike ịgba ụgwọ n'ụzọ akwụmụgwọ gị maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
9. Akwụmụgwọ Ndị Na Emegharị. Mgbe ị zụtara ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya na ntọala ndebanye (dịka, kwa izu, kwa ọnwa, kwa ọnwa 3, ma ọ bụ kwa afọ (dị ka esi metụta)), ị ghọtara ma kwenye na ị na enye ikike maka akwụmụgwọ na emegharị, a ga-akwụ ụgwọ n'aka Microsoft site na ụzọ ị họpụtara na nkebioge mmegharị ị họpụtara, ruo mgbe gị ma ọ bụ Microsoft ma ọ bụ ihe ọzọ kagburu ndebanye ahụ. Site na ịnye ikike maka akwụmụgwọ ndị na emegharị, ị na enye Microsoft ikike ịhazi ụdịrị akwụmụgwọ ahụ dị ka mwepu ego eletrọniki ma ọ bụ nnyefe ego, ma ọ bụ dị ka draftụ eletrọniki n'ime akaụntụ gị ezubere (n'ọnọdụ nke Ụlọ Mkpocha Akpaaka ma ọ bụ akwụmụgwọ ndị eyitere), ma ọ bụ ka ụgwọ n'akaụntụ gị ezubere (n'ọnọdụ kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akwụmụgwọ ndị eyitere) (na mkpokọta, "Akwụmụgwọ Eletrọniki"). A na agbakarị ụgwọ ndebanye n'ọdịniihu nke oge ndebanye emetụtara. Ọ bụrụ na eweghachite akwụmụgwọ ọ bụla na akwụghị ya ma ọ bụ ọ bụrụ na ajụ kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla emetụtara, Microsoft ma ọ bụ ndị na ekesa ọrụ ya nwere ikike ịnakọta ihe ọ bụla a na eweghachite, ihe ajụrụ ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ nke iwu dị nabatara.
10. Ọdịdị Ngwaahịa na Ole na Mmachi Ntimiwu. Ọnụego na ọdịdị ngwaahịa dabere na mgbanwe n'oge ọ bụla yana na enyeghị ọkwa. Microsoft nwere ike itinye mmachi n'ole enwere ike ịzụta kwa ntimiwu, kwa akaụntụ, kwa kaadị akwụmụgwọ, kwa mmadụ, ma ọ bụ kwa ezinụlọ. Ọ bụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ị zụrụ adịghị, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị iji nye gị ngwaahịa ọzọ. Ọ bụrụ na ị họpụtaghị ịzụta ngwaahịa ọzọ ahụ, anyị ga-akagbu nzụta ahụ.
Microsoft nwere ike ịjụ ahịa ọ bụla n'oge ọ bụla, kwụghachi ego ọ bụla ị kwụrụ maka ahịa ahụ, maka ebumnuche ndị gụnyere, mana na ejedebeghị na, ọ bụrụ na i tozughi ọnọdụ ndị akọwapụtara n'oge ahịa ahụ, ọ bụrụ na enweghị ike ịhazi akwụmụgwọ gị, ọ bụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị atụrụ adịghị, ma ọ bụ maka ọnụego ma ọ bụ mperi ndị ọzọ. Na mmemme nke ọnụego ma ọ bụ mperi ndị ọzọ, anyị nwere ikike, n'uche anyị, iji (a) kagbuo ahịa ma ọ bụ nzụta gị ma ọ bụ (b) kpọtụrụ gị maka ntuziaka. Na mmemme nke nkagbu, a ga-emechi ohere gị ịnweta ọdịnaya emetụtara.
Anyị nwere ike imechi ohere ịnweta ọdịnaya metụtara n'akaụntụ gị n'ihi ihe ọ bụla. Anyị nwekwara ike iwepu ma ọ bụ kpọchie egwuregwu, ngwa, ọdịnaya, ma ọ bụ ọrụ dị na ngwaọrụ gị iji kpuchido Ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ enwere ike ịmetụta. Ụfọdụ ọdịnaya na ngwa nwere ike ha agaghị adị kwa oge ma ọ bụ enwere ike ịnye ha n'ime oge atọrọ atọ. Mpaghara nwere ike ịmetụta ọdịdị. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbanwee akaụntụ ma ọ bụ ngwaọrụ gị ka ọ bụrụ mpaghara ọzọ, ị nwere ike ị gaghị enwe ike ibudatagharị ọdịnaya ma ọ bụ ngwa ma ọ bụ gakọrịtagharịa ụfọdụ ọdịnaya ndị ị zụtara; ị nwere ike ịzụtagharịa ọdịnaya ma ọ bụ ngwa ndị ị kwụrụ ụgwọ ha na mpaghara ikpeazụ gị. Belụsọ n'oke iwu dị chọrọ, anyị enweghị nkwa ọ bụla iji nye mbudatagharị ma ọ bụ ndochi nke ọdịnaya ma ọ bụ ngwa ọ bụla ị zụtara.
11. Mmelite. Ọ bụrụ na enwere ike, Microsoft ga-elele maka ma budata mmelite na akpaghị aka maka ngwa gị, ọbụlagodi na ị banyeghị na Ụlọ ahịa ahụ. Ị nwere ike ịgbanwe ntọala gị ma ọ bụrụ na ị masịghị ị na enweta mmelite akpaghị aka na ngwa Ụlọ ahịa. Agbanyeghị, enwere ike imelite ụfọdụ ngwa Ụlọ Ahịa Office nke a na elekọta n'uju ma ọ bụ ọkara n'ịntanetị n'oge ọ bụla site n'aka onye na arụpụta ngwa, ọ nwere ike ọgaghị achọ ikikere gị iji melite.
12. Ikikere Ngwanrọ na Ikike Ojiji. Ngwanrọ na ọdịnaya dijitalụ ndị ọzọ ewetara site na Ụlọ ahịa ahụ nwere ikikere, anaghị ere ya ere, maka gị. Ngwa ndị ebudatara ozugbo site na Ụlọ ahịa ahu dabere na Usoro Ikikere Ngwa Ọkọlọtọ ("SALT") dị na [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0470], belụsọ na enyere usoro ikikere dị iche yana ngwa ahụ. (Ngwa ndị ebudatara site na Ụlọ Ahịa Office anaghị n'okpuru nchịkwa SALT, ha nwere usoro ikikere dị iche.) Ngwa, egwuregwu na ọdịnaya dijitalụ ndị ọzọ enwetara site na Ụlọ ahịa ahụ dabere na iwu ojiji dị na https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Ị ghọtara ma kwenye na ikike gị maka ngwaahịa dijitalụ ndị a machiri na Usoro Ọrịre ndị a, iwu nwebisinka na iwu ojiji arụtụrụ aka n'elu. Ikikere ngwanrọ ndị azụtara na Ụlọ Ahịa Mgbere Microsoft dabere na nkwekọrịta ikikere na eso ngwanrọ ahụ, a ga-achọ ka ị kwenye na nkwekọrịta ikikere ahụ mgbe ị wụnyere ngwanrọ ahụ. Mmepụtagharị ma ọ bụ nkesagharị nke ngwanrọ ma ọ bụ akụrụngwa ọ bụla na esoghi usoro nke usoro ikikere ndị dị mkpa, iwu ojiji, nke iwu dị kwuputere mmachi ya nwere ike ịdapụta na nnukwu ntaramahụhụ ụlọ ikpe. Ndị ngabiga na eche ntaramahụhụ nke kachasị n'okpuru iwu.
BIKO KPỌTỤRỤ ỤLỌ AHỊA MGBERE NKE MICROSOFT (DỊKA AKỌWARA NA NGALABA ỌKWA NA NKWUKỌRỊTA DỊ N'OKPURU) Ọ BỤRỤ NA Ị GA-ACHỌ OTU NNOMI NKE NKWEKỌRỊTA IKIKERE DỊ MAKA NGWANRỌ EKPUCHIRI EKPUCHI, NA AKWỤGHỊ ỤGWỌ Ọ BỤLA, TUPU I MEPEE NGWUNGWU NGWANRỌ Ọ BỤLA.
USORO NA ỌNỌDỤ NDỊ ỌZỌ. Na mgbakwunye enwekwara ike ịnye gị ngwanrọ na ngwaahịa ndị ọzọ enwere ike ibudata, ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ dị maka nzụta ma ọ bụ nnwale n'ime Ụlọ ahịa ahụ na ndabere nke nkwekọrịta ikikere onye njedebe, usoro ojiji, usoro ọrụ ma ọ bụ usoro na ọnọdụ ndị ọzọ dị iche. Ọ bụrụ na ị zụta ma ọ bụ jiri ngwaahịa ndị ahụ, enwere ike ịchọ ka ị nabata usoro ndị ahụ dị ka ọnọdụ nke nzụta, nwụnye, ma ọ bụ ojiji.
MAKA ỊDỊ MMA GỊ, MICROSOFT NWERE IKE ỊWEPỤTA DỊ KA AKỤKỤ NKE ỤLỌ AHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ AHỤ MA Ọ BỤ N'IME NGWANRỌ MA Ọ BỤ AKỤRỤNGWA YA, NGWAỌRỤ NA NGWA MAKA OJIJI NA/MA Ọ BỤ BUDATA NDỊ ABỤGHỊ NKE NGWAAHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ AHỤ ERERE. RUO OKE IWU DỊ NABATARA, MICROSOFT ANAGHỊ ANỌCHITE, EKWE NKWA GBASARA NDABA NKE NSONAAZỤ MA Ọ BỤ MBUPUTE SITERE NA ỤDỊRỊ NGWAỌRỤ MA Ọ BỤ NGWA NDỊ AHỤ.
Biko sọpụrụ ikike akụ ọgụgụ isi nke ndị ọzọ mgbe ị na eji ngwaọrụ na ngwa ndị ahụ ewetara site na Ụlọ ahịa ahụ, ma ọ bụ na ngwanrọ ma ọ bụ akụrụngwa.
13. Koodu maka Mbudata Ngwanrọ na Ọdịnaya. Ụfọdụ ngwanrọ na ọdịnaya enyere gị site na ịme ka njikọ mbudata ha dị n'akaụntụ Microsoft gị metụtara nzụta gị. Dabere na nkeji ahịrịokwu dị n'okpuru, anyị na echekwakarị njikọ mbudata ahụ yana igodo dijitalụ emetụtara maka nzụta ndị a n'akaụntụ Microsoft gị ruo afọ 3 sotere ụbọchị nzụta, mana anaghị ekwe nkwa ịchekwa ha ruo ogologo oge ọ bụla. Maka ngwaahịa ndị ndebanye aha a na eweta site na ịnye njikọ mbudata, ikike usoro na nchekwa dị iche nwere ike ịdị, nke ị ga-enwe ike inyocha ma kwenye na ya n'oge nke ndebanye gị.
Ị kwenyere na anyị nwere ike ịkagbu ma ọ bụ mezie mmemme nchekwa igodo dijitalụ anyị n'oge ọ bụla. Ị kwenyekwara na anyị nwere ike ịkwụsị ịkwado nchekwa nke igodo maka otu ngwaahịa ma ọ bụ karịa n'otu oge n'ihi ihe ọ bụla, gụnyere, dịka ihe ịmaatụ, na ngwụcha nke elegede ndụ nkwado ngwaahịa ahụ, nke ga-agafechaa ị gaghịzị enwe ike ịnweta njikọ mbudata ma ọ bụ igodo dijitalụ ahụ. Ọ bụrụ na anyị kagbuo ma ọ bụ mezie mmemme anyị n'ụdị na ị gaghịzị enwe ike ịnweta njikọ mbudata ma ọ bụ igodo dijitalụ (ndị) ahụ n'akaụntụ gị, anyị ga-enye gị opekata mpe ụbọchị 90 n'ọdịniihu site na iji ozi mkpọtụrụ maka akaụntụ Microsoft emetụtara.
14. Ọnụahịa. Ọ bụrụ na anyị nwere Ụlọ Ahịa Mgbere nke Microsoft n'obodo ma ọ bụ mpaghara gị, ọnụahịa, nhọpụta ngwaahịa na nkwado enyere ebe ahụ nwere ike ịdị iche na ndị nke enyere na Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ruo oke iwu dị nabatara, Microsoft anaghị ekwe nkwa na ọnụahịa, ngwaahịa ma ọ bụ nkwado enyere n'ịntanetị ga-adịkwa na Ụlọ Ahịa Mgbere nke Microsoft ma ọ bụ n'otu aka nke ọzọkwa.
Ụlọ ahịa ahụ enwere nkwa ndakọ ọnụahịa. Anyị agaghị amakọ ọnụahịa mgbasa ozi nke ndị mgbere ndị ọzọ na enye maka otu ihe ahụ.
Anyị nwere ike ịnye nhọrọ iji tinye ahịa maka ụfọdụ ngwaahịa tupu ụbọchị ọdịdị ha. Iji mụtakwuo maka iwu itinye ahịa gboo anyị, biko hụ Ibe Itinye Ahịa-Gboo https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0470.
Belụsọ na ekwuru otu ọzọ, ọnụahịa ndị egosiri na Ụlọ ahịa ahụ agụnyeghị ụtụ isi ma ọ bụ ụgwọ ("Ụtụ isi") nwere ike ịmetụta nzụta gị. Ọnụahịa ndị egosiri na Ụlọ ahịa ahụ agụnyeghị ụgwọ mbute. A ga-etinye ụgwọ ụtụ isi na mbute (dị ka esi metụta) n'ọnụego nke nzụta gị ma gosi ya na ibe mmezu azụmahịa. Naanị gị na ahụta maka ịkwụ ụgwọ ụdịrị Ụtụ isi na ụgwọ ahụ.
Dabere na ọnọdụ gị, ụfọdụ azụmahịa nwere ike ịchọ ntụgharị ego mba ofesi ma ọ bụ enwere ike ịhazi ya n'obodo ọzọ. Ụlọ akụ gị nwere ike ịgba gị ụgwọ ndị ọzọ maka ọrụ ndị ahụ mgbe i jiri kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ mwepu ego. Biko kpọtụrụ ụlọ akụ gị maka nkọwa.
15. Nhọpụta Mmegharị Akpaghị Aka. Anabata mmegharị akpaghị aka n'obodo, mpaghara, ogige/ala, ma ọ bụ steeti gị, ị nwere ike ịhọrọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ iji megharịa na akpaghị aka na ngwụcha nke oge ọrụ ahụbara ama. Ọ bụrụ ị ahọpụtara ịmegharị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na akpaghị aka, anyị nwere ike ịmegharị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ na akpaghị aka na ngwụcha nke oge ọrụ dị ugbu a ma gbaa gị ụgwọ n'ọnụgeo dị mgbe ahụ maka usoro mmegharị ahụ, belụsọ na ị họpụtara ị kagbuo ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ dị ka akọwara n'okpuru. Anyị ga-agba ụgwọ n'ụzọ akwụmụgwọ gị maka mmegharị ahụ, ma ọ dị na faịlụ n'ụbọchị mmegharị ahụ ma ọ bụ na enyere ya ma emechaa. Ị nwere ike ịkagbu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ tupu ụbọchị mmegharị ahụ. Ị ga-akagburiri tupu ụbọchị mmegharị ahụ iji zere ịgba gị ụgwọ maka mmegharị ahụ.
16. Iwu Nweghachite. Anyị ga-anabata nweghachi na mgbanweta maka ngwaahịa ndị tozuru n'ime ụbọchị 14 bido na ụbọchị nke nzụta ma ọ bụ mbudata ahụ, dị ka esi metụta. Weghachite ngwaahịa ahụ tozuru n'ọnọdụ ọhụrụ yana ngwungwu o ji bịa, yanakwa akụkụ niile, ọdịnaya, akwụkwọ ntuziaka na ndekọ ndị etinyere izizi n'ime ya. Iwu Nweghachite a anaghị emetụta iwu ikikere mmadụ ọ bụla nwere ike ịmetụta nzụta gị.
A ga-eweghachiteriri ngwanrọ na egwuregwu ekechiri ekechi n'ime nkechi ya na enweghị ndọka ma gụnye igodo mgbasa ozi na ngwaahịa niile. Dị ka mwezuga nwere oke, enwere ike iweghachite ngwungwu ngwanrọ na egwuregwu ndị emepegoro n'oge nweghachite ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na nkwekọrịta ikikere ahụ, mana naanị ma ọ bụrụ na ị mepụtaghị ma ọ bụ jiri nnomi ọ bụla.
Ụfọdụ ihe etozughi maka nweghachite; belụsọ na iwu ekwuru otu ọzọ ma ọ bụ site ọnọdụ otu ngwaahịa, nzụta nke ụdị ngwaahịa ndị a niile bụ nke ikpeazụ, anaghị akwụghachi ụgwọ ya:
ngwa dijitalụ, egwuregwu, ọdịnaya dị n'ime ngwa na ndebanye, egwu, ihe nkiri, ihe ngosi TV, yana ọdịnaya emetụtara;
kaadị onyinye na ọrụ/kaadị ndebanye (dịka, Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
ngwaahịa ndị ahaziri iche;
ngwaahịa ahịa pụrụ iche, ma ọ bụrụ na ọ bụghị akụkụ nke onyinye nkwado nke Ụlọ ahịa;
ngwaahịa random access memory ("RAM");
ọrụ ndị emegoro ma ọ bụ jiri; na
ihe mkpocha ma ọ bụ ndị akanyere nkenke aha dị ka "Ọrịre Ikpeazụ" ma ọ bụ "Anaghị Eweghachite".
Mgbe ị mere nweghachite tozuru, anyị ga-etighachi ọnụego ahụ n'uju, na erughi ụgwọ mbute na njikwa izizi (ma ọ bụrụ na enwere), ị ga-enweta nkwụghachi ụgwọ gị n'ihe dị ka ụbọchị azụmahịa 3-5. A ga-etinye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla n'otu akaụntụ ahụ, ma jiri otu ụzọ akwụmụgwọ ahụ, eji wee tinye ahịa ahụ (belụsọ na ị họpụtara kredit Ụlọ ahịa n'ọnụego nke nkwụghachi ụgwọ ahụ).
Maka nkọwapụta n'uju gbasara otu esi eweghachite ngwaahịa ndị tozuru, hụ Ibe Nweghachite na Nkwughachi Ụgwọ anyị https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0470.
Ọ bụrụ na i bi na Taiwan, biko mara na site na Atụmatụ Mkpuchi Onye Ahịa nke Taiwan yana iwu ha ndị dị mkpa, nzụta niile metụtara ọdịnaya dijitalụ ewetara site n'ụdị anaghị emetụ aka na/ma ọ bụ ọrụ ndị dị n'ịntanetị bụ nke ikpeazụ anaghị akwụghachi mgbe ewetara ụdịrị ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ ahụ n'igweokwu. Ị nweghị ikike elele nke oge ezumike ọ bụla ma ọ bụ nkwụghachi ọ bụla.
17. Akwụmụgwọ Akwụrụ Gị. Ọ bụrụ na i ji ụgwọ, mgbe ahụ ị kwenyere na ịnye anyị ozi ọ bụla anyị chọrọ n'oge iji wetara gị ụgwọ ahụ. Ị na ahụta maka ụtụ isi na ụgwọ ọ bụla ị nwere ike ibute dị ka nsonaazụ nke akwụmụgwọ a emeere gị. Ruo oke iwu dị nabatara, ị ga-asọpụrịrị ọnọdụ ọzọ ọ bụla anyị dowere n'ikike gị n'akwụmụgwọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnweta akwụmụgwọ na mmehie, anyị nwere ike iweghachi ma ọ bụ chọọ nweghachite nke akwụmụgwọ ahụ. Ị kwenyere ịnyere anyị aka na mbọ anyị na agba iji mee nke a. Anyị nwekwara ike ịbelata akwụmụgwọ emere gị na enyeghị ọkwa iji mezie maka nkwụfe ụgwọ ikpeazụ ọ bụla.
18. Kaadị Onyinye. A na achịkwa kaadị onyinye ndị azụtara na Ụlọ Ahịa Mgbere nke Microsoft n'okpuru Nkwekọrịta Kaadị Onyinye Mgbere dị na https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.
Ozi maka kaadị onyinye Skype dị na ibe Enyemaka nke Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).
Mgbapụta na ojiji nke kaadị onyinye Microsoft ndị ọzọ nọ n'okpuru nchịkwa nke Usoro na Ọnọdụ nke Kaadị Onyinye Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).
19. Ọrụ Ndị Ahịa. Biko gaa na Ibe Ọrịre na Nkwado anyị https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0470 maka ozi ndị ọzọ gbasara nhọrọ ọrụ ndị ahịa.
20. Usoro Na Agbanwe. Microsoft nwere ike ịgbanwe Usoro Ọrịre n'oge ọ bụla na enyeghị gị ọkwa. Usoro Ọrịre dị ire n'oge i tinyere ahịa gị ga-achịkwa nzụta gị ma nọrọ ka nkwekọrịta nzụta n'etiti anyị. Tupu nzụta gị ọzọ, Microsoft nwegoro ike ịgbanwe Usoro Ọrịre na enyeghị gị ọkwa. Biko gụọ Usoro Ọrịre oge ọ bụla ị gara na Ụlọ ahịa ahụ. Anyị kwadoro na ị chekwara ma ọ bụ bipụta otu nnomi nke Usoro Ọrịre maka nrụtụ aka n'ọdịniihu mgbe ị zụtara ihe.
21. Mmachi Arọ. Mmachi arọ nwere ike ịdị n'otu i si eji Ụlọ ahịa ahụ, gụnyere nzụta.
22. Nzuzo na Mkpuchido nke Ozi Nkeonwe. Nzuzo gị dị anyị mkpa. Anyị na eji ụfọdụ ozi anyị na anata gị iji rụọ ọrụ ma kwanye ihe na Ụlọ ahịa ahụ. Biko gụọ Nkwupute Nzuzo Microsoft n'ihi na ọ na akọwa ụdị data anyị na anata gị yana ngwaọrụ gị ("Data") yana otu anyị si eji Data gị. Nkwupute Nzuzo ahụ na akọwakwa otu Microsoft si eji nkwukọrịta gị n'etiti ndị ọzọ; mbisa ma ọ bụ nzaghachi ị nyefere na Microsoft site na Ụlọ ahịa ahụ; yana faịlụ, foto, dọkụmentị, ọdịyo, ọrụ dijitalụ, na vidio ndị i bugoro, chekwaa ma ọ bụ kekọrịta na ngwaọrụ gị ma ọ bụ site na Ụlọ ahịa ahụ ("Ọdịnaya Gị"). Site na iji Ụlọ ahịa ahụ, ị na ekwupute nkwenye maka nnakọta, ojiji na mkpughepu nke Ọdịnaya na Data gị site n'aka Microsoft dị ka esi kọwaa na Nkwupute Nzuzo ahụ.
23. Ngosipụta na Agba Ngwaahịa. Microsoft na anwa igosipụta agba na onyonyo ngwaahịa nke ọma mana anyị enweghị ike ikwe nkwa na agba ị hụrụ na ihuenyo ngwaọrụ gị ga-abụ otu ihe kpọmkwem ka agba ngwaahịa ahụ.
24. Mmehie na Ngosiputa Ụlọ Ahịa. Anyị na arụsị ọrụ ike iji bipụta ozi ziri ezi, melite Ụlọ ahịa ahụ kwa oge, ma mezie mmehie mgbe achọpụtara ha. Agbanyeghị, ọdịnaya ọ bụla dị na Ụlọ ahịa ahụ nwere ike ọgaghị ezi ezi ma ọ bụ mee ochie n'oge ọ bụla. Anyị nwere ikike ịme mgbanwe na Ụlọ ahịa ahụ n'oge ọ bụla, gụnyere n'ọnụahịa, nkọwapụta, onyinye na ọdịdị nke ngwaahịa.
25. Nkwụsị nke Ojiji ma ọ bụ Nnweta. Microsoft nwere ike imechi akaụntụ gị ma ọ bụ ojiji nke Ụlọ ahịa ahụ n'oge ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla, gụnyere, na enweghị mmachi, ọ bụrụ na ị gabiga Usoro Ọrịre ma ọ bụ Iwu Ụlọ Ahịa ndị a, ma ọ bụ ọ bụrụ na Microsoft anaghị ejikwa Ụlọ ahịa ahụ. Site na iji Ụlọ ahịa ahụ, ị kwenyere na ị ga-ahụta (n'ụzọ nke usoro ndị a) maka ahịa ọ bụla ị mere ma ọ bụ ụgwọ i butere tupu ụdịrị mmechi ahụ. Microsoft nwere ike ịgbanwe, kwụsị, ma ọ bụ otu aka ọzọ kwụsịtụ Ụlọ ahịa ahụ n'oge ọ bụla, n'ihi ihe ọ bụla, na enyeghị gị ọkwa.
26. Akwụkwọ Ikike na Mmachi nke Ihe Nkasị Obi. RUO NA OKE ANABATARA N'OKPURU IWU MPAGHARA GỊ, MICROSOFT NA NDỊ NA EBUTE YA, NDỊ NKESA, NDỊ NREGHARỊ, NA NDỊ NA EWETA ỌDỊNAYA ANAGHỊ EKWUPUTE MA Ọ BỤ TỤNYE AKWỤKWỌ IKIKE, NKWA, MA Ọ BỤ ỌNỌDỤ, GỤNYERE ỌRỊRE, OGO AFỌ OJUJU, NDABA MAKA OTU EBUMNUCHE, MBỌ ỌRỤ AKA, AHA, MA Ọ BỤ MWEPU NNAGHARA. NGWAAHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ NDỊ ERERE MA Ọ BỤ DỊ N'ỤLỌ AHỊA AHỤ NWERE AKWỤKWỌ IKIKE, MA Ọ BỤRỤ NA ỌBỤGHỊ HA NIILE, NAANỊ N'OKPURU NKWEKỌRỊTA IKIKERE MA Ọ BỤ AKWỤKWỌ IKIKE ONYE NRỤPỤTA Ọ BỤLA SO HA WEE BỊA. BELỤSỌ KA ENYERE N'OKPURU NKWEKỌRỊTA IKIKERE MA Ọ BỤ AKWỤKWỌ IKIKE NKE ONYE NRỤPỤTA SO WEE BỊA MA DABERE NA IKIKERE GỊ:
NZỤTA NA OJIJI GỊ BỤ NAANỊ N'AKA GỊ KA Ọ DỊ:
ANYỊ NA EWETA NGWAAHỊA NA ỌRỤ "DỊ KA Ọ DỊ," "YANA MPERI NIILE," YANA "KA Ọ DỊ";
Ị NA EWEGHARA IHE EGWU NKE OGO NA ARỤMỌRỤ HA; YANA
Ị NA EWEGHARA ỤGWỌ NIILE MAKA NLEKỌTA MA Ọ BỤ NDOZI NIILE DỊ MKPA.
MICROSOFT ANAGHỊ EKWE NKWA NKE NDABA MA Ọ BỤ ỌDỊDỊ NKE OZI DỊ SITE NA ỤLỌ AHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ NDỊ AHỤ. Ị NA EKWENYE NA SISTEMỤ KỌMPUTA NA IGWE OKWU NA ENWE MPERI MA NA AKWỤSỊ ỌRỤ OGE ỤFỌDỤ. ANYỊ ANAGHỊ EKWE NKWA NA ỊNWETA ỤLỌ AHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ NDỊ AHỤ AGAGHỊ ENWE NKWỤCHIBIDO, NA Ọ GA-ADỊ OZUGBO, NWEE NCHEDO, MA Ọ BỤ AGAGHỊ ENWE MPERI, MA Ọ BỤ NA NTUFU ỌDỊNAYA AGAGHỊ EME.
Ọ BỤRỤ, NA AGBANYEGHỊ USORO ỌRỊRE NDỊ A, Ị NWERE NJIRISI MAKA ỊZỌPỤTA MMEBI BIDORO NA MA Ọ BỤ METỤTARA NA ỤLỌ AHỊA AHỤ, ỌRỤ, MA Ọ BỤ NGWAAHỊA MA Ọ BỤ ỌRỤ Ọ BỤLA EWETERE, RUO NA OKE IWU DỊ NABATARA, IHE NKASỊ OBI NAANỊ GỊ BỤ ỊME NWEGHACHITE SITE N'AKA MICROSOFT MA Ọ BỤ NDỊ NA EBUTE YA, NDỊ NREGHARỊ, NDỊ NKESA, YANA NDỊ NA EWETA ỌDỊNAYA MGBAKỌTA MMEBI OZUGBO RURU (1) ỌNỤAHỊA MA Ọ BỤ ỤGWỌ MAKA OTU ỌNWA NKE ỌRỤ Ọ BỤLA, NDEBANYE, MA Ọ BỤ ỤGWỌ NWERE OYIRI (MANA NA AGỤNYEGHỊ ỌNỤAHỊA NZỤTA MAKA NGWAIKE, NGWANRỌ, NKWADO, MA Ọ BỤ AKWỤKWỌ IKIKE ADỌTỊRỊ), MA Ọ BỤ (2) US $100.00 MA Ọ BỤRỤ NA ENWEGHỊ ỌRỤ, NDEBANYE, MA Ọ BỤ ỤGWỌ OYIRI Ọ BỤLA.
Ị NWERE IKE ỊNWE ỤFỌDỤ IKIKERE N'OKPURU IWU MPAGHARA GỊ. ỌNWEGHỊ IHE Ọ BỤLA DỊ NA NKWEKỌRỊTA EMERE KA Ọ METỤTA IKIKE NDỊ AHỤ, MA Ọ BỤRỤ NA HA DỊ.
Maka ndị ahịa bi na New Zealand, ị nwere ike ịnwe ikike n'okpuru Atụmatụ Nkwa Ndị Ahịa nke New Zealand, ọnweghị ihe dị n'ime Usoro Ọrịre ndị a emere ka ọ metụta ikike ndị ahụ.
27. Mmachi nke Ụta. RUO NA OKE IWU DỊ NABATARA, Ị KWENYERE NA Ị NWEGHỊ IKE IWEGHACHITE MMEBI MA Ọ BỤ NTUFU ỌZỌ Ọ BỤLA, GỤNYERE MMEBI NSONAAZỤ, PỤRỤ ICHE, MERE N'ỤZỌ ỌZỌ, DAPỤTARA, MA Ọ BỤ NKE AKPACHARA ANYA, MA Ọ BỤ URU ETUFURU. Mmachi na mwezuga ahụ NA NGALABA 26 NA 27 na adị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na i bute mmebi, ọbụlagodi na anyị mara ma ọ bụ kwesịrị ịma maka ọmụme nke mmebi ahụ. ỤFỌDỤ STEETI MA Ọ BỤ OGIGE/mpaghara ANAGHỊ ANABATA MWEZUGA MA Ọ BỤ MMACHI NKE MMEBI NDAPỤTA MA Ọ BỤ NSONAAZỤ, YABỤ MMACHI MA Ọ BỤ MWEZUGA AHỤ NWERE IKE HA AGAGHỊ EMETỤTA GỊ.
Ruo oke iwu dị nabatara, mmachi na mwezuga ndị a na emetụta EBUBO Niile, N'OKPURU ISIOKWU IWU Ọ BỤLA, metụtara Ụlọ ahịa ahụ, Ọrụ ndị ahụ, usoro ọrịre ndị a, ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọ bụla enyere, gụnyere ntufu nke ọdịnaya, nje MA Ọ BỤ MALỤWE ọ bụla na emetụta otu i si eji Ụlọ ahịa ma ọ bụ Ọrụ ahụ MA Ọ BỤ NGWAAHỊA MA Ọ BỤ Ọ BỤLA ENWETARA SITE NA ỤLỌ AHỊA AHỤ; YANA OGBUGBU OGE MA Ọ BỤ mbibi na ibido ma ọ bụ imezu nnyefe ma ọ bụ azụmahịa.
28. Ịkọwa Usoro Ndị A. Akụkụ nke Usoro Ọrịre ndị a niile na emetụta oke kachasị iwu dị mkpa nabatara; ị nwere ike ịnwe ikike ndị ka n'ogige nke ebe obibi gị (ma ọ bụ, ma bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị). Ọ bụrụ na ekpebie na anyị enweghị ike ịmanye akụkụ nke Usoro Ọrịre ndị a edere ede, anyị nwere ike iji usoro ndị nwere oyiri wee dochie usoro ndị ahụ ruo n'oke enwere ike ịmanye n'okpuru iwu dị mkpa, mana ihe ndị fọdụrụ na Usoro Ọrịre ndị a agaghị agbanwe. Usoro Ọrịre ndị a bụ naanị maka gị yana elele anyị; ha abụghị maka elele nke mmadụ ọzọ ọ bụla, belụsọ maka ndị osote na ndị nweghara ọrụ nke Microsoft. Usoro ndị ọzọ nwere ike ịdị ma ọ bụrụ na ị zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ si na weebụsaịtị Microsoft ndị ọzọ.
29. Oke ọrụ. Ruo na oke iwu dị nabatara, anyị nwere ike ịkenye, nyefee ma ọ bụ otu aka ọzọ tufuo ikike na ọrụ anyị dị n'okpuru Usoro Ọrịre ndị a, n'uju ma ọ bụ na mpekere, n'oge ọ bụla na enyeghị gị ọkwa. Ị gaghị ekenye ma ọ bụ nyefee ikike ọ bụla n'okpuru Usoro Ọrịre ndị a.
30. Ọkwa na Nkwukọrịta. Maka ajụjụ enyemaka maka ndị ahịa, biko hụ ibe Ọrịre na Nkwado dị na Ụlọ ahịa ahụ. Maka esemokwu, soro ụkpụrụ ọkwa dị na ngalaba a.
31. Onye Enwere Nkwekọrịta N'etiti Ya, Nhọrọ nke Iwu na Ebe iji Kpezie Esemokwu.
a. America Dị N'Akụkụ Ugwu ma ọ bụ Ndịda nọ na mpụga United States na Canada. Ọ bụrụ na i bi na (ma ọ bụ, ọ bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị dị na) America Dị N'Akụkụ Ugwu ma ọ bụ Ndịda nọ na mpụga United States na Canada, ị na abanye na nkwekọrịta n'etiti Microsoft Corporation, One Microsoft Redmond, WA 98052, U.S.A. Iwu Steeti Washington na achịkwa nkọwa nke Usoro Ọrịre ndị a yana ebubo maka ngabiga ha, agbanyeghị nhọrọ nke ụkpụrụ iwu. Iwu nke obodonke anyị na ewega Ụlọ ahịa na Ọrụ ahụ na achịkwa ebubo ndị ọzọ niile (gụnyere mkpuchido ndị ahịa, asọmpi na adịghị mma, ebubo ngabiga ikike).
b. Middle East ma ọ bụ Africa. Ọ bụrụ na i bi na (ma ọ bụ, ọ bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị dị na) na Middle East ma ọ bụ Africa, ị na-abanye na nkwekọrịta n'etiti Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Iwu nke Ireland na achịkwa nkọwa nke Usoro Ọrịre ndị a yana ebubo maka ngabiga ha, agbanyeghị nsogbu nke ụkpụrụ iwu. Iwu nke obodo nke anyị na ewega Ụlọ ahịa na Ọrụ ahụ na achịkwa ebubo ndị ọzọ niile (gụnyere mkpuchido ndị ahịa, asọmpi na adịghị mma, ebubo ngabiga ikike). Gị na anyị na enweghị obi abụọ kwenyere na ikike na ebe pụrụ iche nke ụlọ ikpe nke Ireland maka esemokwu niile na amalite na ma ọ bụ metụtara Usoro Ọrịre ndị a ma ọ bụ Ụlọ ahịa ahụ.
c. Asia ma ọ bụ South Pacific, belụsọ maka obodo akpọrọ n'okpuru. Ọ bụrụ na i bi na (ma ọ bụ, ọ bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị dị na) Asia (belụsọ China, Japan, Repọbliki nke Korea ma ọ bụ Taiwan), ị na abanye na nkwekọrịta n'etiti Microsoft Regional Sales Corporation, ụlọ ọrụ ahaziri n'okpuru iwu nke Steeti nke Nevada, U.S.A., nwere agalaba na Singapore na Hong Kong, nwere isi ụlọ ọrụ na 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Iwu Steeti Washington na achịkwa nkọwa nke Usoro Ọrịre ndị a yana ebubo maka ngabiga ha, agbanyeghị esemokwu nke ụkpụrụ iwu. Iwu nke obodo nke anyị na ewega Ụlọ ahịa ahụ na achịkwa ebubo ndị ọzọ niile (gụnyere mkpuchido ndị ahịa, asọmpi na adịghị mma, ebubo ngabiga ikike). Esemokwu ọ bụla na amalite ma ọ bụ metụtara Usoro Ọrịre ndị a ma ọ bụ Ụlọ ahịa ahụ, gụnyere ajụjụ ọ bụla gbasara ọdịdị, nrụọrụ, ma ọ bụ nkwụsị ha, ga-aga na ma nwee mkpezi ikpeazụ n'aka ụlọ ikpe dị na Singapore n'usoro nke Iwu Ụlọ Ikpe nke Singapore International Arbitration Center (SIAC), ndị a na ahụta iwu ha ka ndị ekpokọtara n'ime akpaokwu a ka nrụtụ aka. Ebe ibu ikpe ga-enwe otu ọkaiwu nke Onye isi nke SIAC ga-ahọpụta. Asụsụ nke ikpe ga-abụ Bekee. Mkpebi nke ọkaiwu ga-abụ kpamkpam, ọ ga-adịrịrị, agaghị agbali ya, enwere ike iji ya maka mkpebi n'obodo ma ọ bụ mpaghara ọ bụla.
d. Japan. Ọ bụrụ na i bi na (ma ọ bụ, ọ bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị dị na) Japan, ị na abanye na nkwekọrịta n'etiti Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Iwu nke Japan na achịkwa Usoro Ọrịre ndị a yana okwu ọ bụla na amalite na ma ọ bụ metụtara ha ma ọ bụ Ụlọ ahịa ahụ.
e. Repọbliki nke Korea. Ọ bụrụ na i bi na (ma ọ bụ, ọ bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị dị na) Repọbliki nke Korea, ị na abanye na nkwekọrịta n'etiti Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Iwu nke Repọbliki nke Korea na achịkwa Usoro Ọrịre ndị a yana okwu ọ bụla na amalite na ma ọ bụ metụtara ha ma ọ bụ Ụlọ ahịa ahụ.
f. Taiwan. Ọ bụrụ na i bi na (ma ọ bụ, ọ bụrụ na azụmahịa, isi ụlọ ọrụ gị dị na) Taiwan, ị na abanye na nkwekọrịta n'etiti Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Iwu nke Taiwan na achịkwa Usoro Ọrịre ndị a yana okwu ọ bụla na amalite na ma ọ bụ metụtara ha ma ọ bụ Ụlọ ahịa ahụ. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara Microsoft Taiwan Corporation, biko lelee weebụsaịtị nke Ministry of Economic Affairs R.O.C wetara. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Gị na anyị na enweghị obi abụọ na izube Ụlọ Ikpe Mpaghara Taiwan Taipei dị ka ụlọ ikpe nke atụmatụ izizi nwere ikike n'elu esemokwu niile na amalite na ma ọ bụ metụtara Usoro ndị a ma ọ bụ Ụlọ ahịa ahụ, ruo oke kachasị anabatara na iwu Taiwan.
a. Ọkwa na ụkpụrụ maka ibo ebubo nke ngabiga akụ ọgụgụ isi. Microsoft na asọpụrụ ikike akụ ọgụgụ isi nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iziga ọkwa nke ngabiga akụ ọgụgụ isi, gụnyere ebubo nke ngabiga nwebisinka, biko jiri ụkpụrụ anyị maka ịnyefe Ọkwa nke Ngabiga (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). AJỤJỤ NIILE ADỊGHỊ MKPA N'ỤKPỤRỤ A AGAGHỊ ENWETA NZAGHACHI.
Microsoft na eji ụkpụrụ atọrọ na Aha 17, Koodu United States, Ngalaba 512 iji zaghachi ọkwa nke ngabiga nwebisinka. N'ọnọdụ ndị ziri ezi, Microsoft nwere ike ịgbanyụ ma ọ bụ mechie akaụntụ nke ndị ọrụ nke ọrụ Microsoft ndị na gabiga iwu oge niile.
b. Ọkwa Nwebisinka na Ụghalahịa.
Ọdịnaya niile nke Ụlọ ahịa na Ọrụ ahụ bụ Nwebisinka ©2016 Microsoft Corporation na/ma ọ bụ ndị na ebute ya yana ndị ọzọ na akwado ya, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Enwere ikike niile. Anyị ma ọ bụ ndị na ebunye anyị ahịa yana ndị ọzọ na akwado anyị nwere aha, nwebisinka, yana ikike akụ ọgụgụ ndị ọzọ dị na Ụlọ ahịa, Ọrụ na ọdịnaya ahụ. Microsoft na aha, njirimara, na akara nke ngwaahịa na ọrụ Microsoft niile nwere ike ịbụ ụghalahịa ma ọ bụ ụghalahịa edebanyere n'iwu nke Microsoft na United States, Canada na/ma ọ bụ obodo ndị ọzọ.
Enwere ike ịchọta ndepụta nke ụghalahịa nke Microsoft na: https://www.microsoft.com/trademarks. Aha nke ụlọ ọrụ na ngwaahịa ndị dị adị nwere ike ịbụ ụghalahịa nke ndị nwe ha iche iche. Echedoro ikike ọ bụla ekwuputeghị n'ime Usoro Ọrịre ndị a.
33. Amụma Mkpachapụ Anya. Iji zere mmerụ ahụ, mgbakasị ahụ ma ọ bụ anya mgbu nwere ike ịdị, ị ga-ezu ike na iji egwuregwu ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, karịchara ma ọ bụrụ na ị nwee mgbu ma ọ bụ ike ọgwụgwụ ọ bụla dapụtara na ojiji. Ọ bụrụ na ị nwee mgbakasi ahụ, zuo ike. Mgbakasị ahụ nwere ike ịgụnye mmetụta nke ịrụ ọgbụgbọ, ahụ ọkụ, ajụ, amaghị ihe a ga-eme, isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, anya mgbu, ma ọ bụ ọkụkọ anya. Iji ngwa nwere ike idughe gị ma bute nsogbu na okirikiri gị. Zere mberede njem, akwa nrigo ụlọ, okpuru ụlọ pere mpe, ihe ndị na emebi ngwangwa nwere ike imebi. Obere pasenteji nke ndị mmadụ nwere ike ịnwe ahụmịhe akwụkwụ mgbe ekpughere na ụfọdụ onyonyo dịka ọkụ na ama ama ma ọ bụ usoro na egosi na ngwa. Ma ndị mmadụ nwere ndekọ nke akwụkwụ nwere ike ịnwe ọnọdụ achọpụtabeghị nwere ike ibute akwụkwụ ndị a. Ihe ngosi nwere ike ịgụnye isi ọwụwa, obere anya mgbu, ntabi anya, ọma jijiji ụkwụ, ajụ, mgbagwoju anya, ajụ, ma ọ bụ akwụkwụ. Ozugbo kwụsị iji ma kpọtụrụ dọkịnta ma ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe nke ihe ngosi ndị a ọ bụla, ma ọ bụ kpọtụrụ dọkịnta tupu i jiri ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ị nweela ihe ngosi ejikọtara yana akwụkwụ. Nne na nna kwesịrị inyocha otu ụmụaka ha si eji ngwa maka ihe ngosi.